Golaha Shacabka oo markale maanta ka doodaya Liil-tirka Siyaasiga DFS iyo Jamaacadda JUS – Kalfadhi
Golaha Shacabka oo markale maanta ka doodaya Liil-tirka Siyaasiga DFS iyo Jamaacadda JUS
Kulanka Golaha Shacabka ee maanta waxaa hor yaala laba ajande oo kala ah warbixin ku saabsan Jaamacadda Ummadda Soomaaliyeed (JUS) iyo Hindise Sharciyeedka Mashruuca Liilitirka Siyaasiyiinta, oo ay Xildhibaanada Goluhu marsiin doonaan maanta Aqris Labaad.
Jaamacadda Ummadda Soomaaliyeed (JUS) ayaa in dib loo hawl-geliyo waxay timid sanadkii 2013-ka dabayaaqadiisii, kadib markii Golaha Wasiirada ee Xukumaddii Reysal Wasaare Cabdi Faarax Shirdoon ay ansixiyeen in Jaamacadda, oo xirneed 22 sano, dib loo furo. Sanadkii 2014-ka dabayaaqadiisii ayaa lagu guuleystay in Jaamacaddaas irdaha loo balaqo, oo ay qabato ardaydii ugu horeysay.
Guddiga Sare ee Jaamacadda, oo uu waqtigas Guddoomiye u ahaa Madaxweynihii hore, Xasan Sheekh Maxamuud, ayaa go’aamiyey in shaqada Jaamacadda lagu bilaabayo miisaaniyadda ay u baahan tahay. Lacag gaareysa 3 milyan ka badan ayey sanadkaas Golaha Wasiiradu u meel mariyeen Jaamacadda.
Taas marka laga soo tago, qodobka kale ee maanta Golaha hor yaal, oo ah Mashruuca Liil-tirka Siyaasiyiinta DFS, horay ayuu Goluhu uga dooday, waxaana uu mashruucani diiradda saarayaa inuusan siyaasiga Soomaaliyeed ee u soo shaqeeyey Qaranka dayacmin markuu ka dego xilka siyaasadeed ee uu dowladeed kadib. Mashruucan ayaa xoogga saaraya in siyaasigaas gunno uu ku noolaado looga sharciyeeyo miisaaniyadda dowladda.
Xildhibaan Mahad Cabdalla Cawad, oo ah Gudoomiye Kuxigeenka 2-aad ee Golaha Shacabka, ayaa u sheegay xildhibaanada in hindisahaan oo kale la horkeenay Baarlamaankii 9-aad ee Soomaaliya, “hase ahaatee ma uu ku guuleysan” buu yiri Gudoomiye Mahad. “Waxaan codsanayaa in haddii arrin la siinayo muhiimad laga bilaabo kan” ayuu raaciyey. Waxaa uu sheegay in Baarlamaankii 9-aad uu waqtagii ka dhamaaday intii uu ku mashquulsanaa awoodaha iyo xuquuqaadka Madaxda Golayaasha.
Xildhibaan Fiqi ayaa dhaliilay warqad ay dowladdu ku taageertay Sacuudiga
Guddoomiye Cawad: Deeqda waxbarasho ee ugu badan waxaan ka helnaa Suudaan